Mareykanka oo ciidamo kumannaan gaaraya kala baxaya dalka Ciraaq – Calanka.com
Mareykanka oo ciidamo kumannaan gaaraya kala baxaya dalka Ciraaq
Mareykanka ayaa in kabadan seddex meeloodoow meel ciidamadiisa kagala bixi doona Ciraaq todobaadyo gudahood, sida uu sheegay taliyahooda ugu sareeya ee Bariga Dhexe.
Jeneraal Kenneth McKenzie ayaa wariyeyaasha u sheegay in ciidamada Ciraaq jooga tiradoodu ay tahay 5,200 balse haatan lagu soo koobi doono 3,000 inta lagu guda jiro bisha Sebtember.
Maraykanka waxaa uu sheegay in ciidamada haray ay sii wadi doonaan la-talinta iyo caawinta ciidamada amniga ee Ciraaq si ay “u ciribtiraan” kooxda jihaad-doonka ah ee Daacish (IS).
Bishii la soo dhaafay, ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar kale xaqiijiyey inuu qorsheynayo in dhammaan ciidamadiisa kala baxo Ciraaq sida ugu dhakhsiyaha badan.
Waxaa la filayaa in uu soo dhaweeyo in ciidamada Ciraaq la dhimo taas oo uu arko horumar laga gaaray balanqaadkiisi ololaha doorashada 2016ka oo uu ku sheegay in ciidamada Maraykanka laga soo saaro dagaalada aan dhamadka lahayn.
Joogitaanka ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale noqotay arinta ugu weyn ee Ciraaq tan iyo markii Mareykanka uu duqeyn diyaaradeed ku dilay Baqdaad, Jeneraalkii ugu sare ee reer Iran, Qasem Soleimani ,bishii Janaayo.
Waa maxay sababta loo qaaday tallaabadan?
Xillii uu booqasho ku joogay Baqdaad, Jeneraal McKenzie wuxuu sheegay in militariga Mareykanka ay kalsooni ku qabaan awoodda ay ku shaqeyn karaan si madax banaan ciidamada amniga ee Ciraaq iyo la tacaalista halista kooxda IS, oo mar maamuli jirtay dhul ballaaran oo Ciraaq kamid ah.
“Anaga oo ogsoon horumarka weyn ee ay sameeyeen ciidamada Ciraaq iyo la tashi iyo ka wada shaqayn ay la sameeyeen dowlada Ciraaq iyo xulafada aan wada shaqeynta leenahay, Mareykanku wuxuu go aansaday in la dhimo ciidamadeena ku sugan Ciraaq oo laga bilaabo 5,200 ilaa 3,000 oo askari inta lagu jiro bisha Sebtember, “ayuu u sheegay suxufiyiinta.
Tiradan ciidamada ee hoos loo dhigay waxay noo sahlaysa inaan sii wadno la-talinta iyo caawinta saxibadeen reer Ciraaq sidii loo cirib tiri lahaa waxaa ugu dambeeya ee kooxda [IS] ee Ciraaq iyo sidii loo xaqiijin in laga guuleysto, “ayuu raaciyay.
McKenzie wuxuu sheegay in Mareykanku sii wadi doono balaarinta barnaamijyada aqoon is weydaarsi, oo hadafkiisa ugu dambeyna uu yahay in la helo ciidamo Ciraaq oo awood u leh kahortaga dib u soo noqoshada kooxda IS iyo sugidda madaxbanaanida ciraaq iyaga oo aan cidna caawinaadu fidin.
Go’aanka ayaa sidoo kale daba socda falcelin la sheegay inay ka timid Madaxweyne Trump kadib markii la sheegay in uu askarta Mareykanka ee lagu dilay ciraaq uu ku tilmaamay “kuwa khasaaray”. Madaxweynaha ayaa beeniyay eedeymahaasi.
Madaxweynaha inuu hadalkaasi yiri waxaa marki ugu horreysay qoray wargeyska ‘the Atlantic’. Kaddibna warbixinno hadalkaasi sii xoojinaya waxaa qoray ‘Associated Press’ iyo ‘Fox news’.
Hase yeeshee, madaxweynaha maamulkiisa waxay sheegeen inuu madaxweynaha hadalkaasi uu odhan.
Kooxaha sida weyn uga soo horjeesatay hadalka madaxweynaha waxaa ka mid ah geesiyada dagaallada ee dalkaasi Mareykanka.
Mareykanka sidoo kale wuxuu doonayaa inuu ciidamadiisa kala baxo Afghanistan iyo Jarmalka.
Dhamaan ciidamada Maraykanka ayaa la filayaa in laga soo saaro Afghanistan bisha afaraad ee sannadka dambe sida ku cad heshiis ay la saxiixdeen kooxda Taliban horaanti sanadkan.